सुनको मूल्य – ‘७ हजार ३ सय’ रुपैयाँले घट्यो ; प्रतितोला कतिमा झर्यो त ? हेर्नुहोसा…
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । गत वर्षको भदौ ७ गते र यस वर्ष सोही दिनको तुलनामा सुनको मूल्य ७ हजार ३ सय रुपैयाँले घटेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार गत वर्षको भदौ ७ गते छापावाला सुनको मूल्य ९८ हजार ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । महासंघका अनुसार यस वर्षको सोही दिनसम्म आईपुग्दा नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेर ९१ हजार १ सय रुपैयाँमा झरेको छ ।
यस्तै, सोही अवधि(गत वर्षको भदौ ७ देखि यस वर्षको भदौ ७ गतेसम्म) मा चाँदीको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ । उक्त अवधिमा चाँदीको भाउ प्रतितोला १५५ रुपैयाँले घटेको महासंघले जनाएको छ ।
गत वर्षको भदौ ७ गते प्रतितोला १ हजार ३४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी यस वर्षको सोही दिनसम्म आईपुग्दा १ हजार १९० रुपैयाँमा झरेको छ ।
यो पनि….आज नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस यस्तो छ साउदी,कतार, मलेसिया लगायत देशको बिनिमय दर
२०७८ भाद्र ८, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 227 Views